Fedora 29 Beta: iyo yekutanga kugovera inosanganisira Gnome 3.30 "Almería" | Linux Vakapindwa muropa
Fedora 29 Beta ndiyo yekutanga kugovera yakashandiswa mavhiki maviri apfuura Gnome 3.30 «Almería» seye default desktop.
Izvi zvinosanganisira, pakati pezvimwe zvinhu, Flatpak 1.0 uye inogadziridza Flatpaks yakaiswa kuburikidza neGnome package manejimendi software.
Thunderbolt yaive nani yakabatanidzwa uye chishandiso chitsva chakaunzwa nePodcast. NaFedora 29, vagadziri vari kutanga kuona kugadzirisa papuratifomu yeARM.
Izvi zvinoratidzwa mubeta nekuvandudzwa kweZRAM rutsigiro muARMv7 uye aarch64, iyo inogona kuvandudza mashandiro emakomputa epabhodhi, senge Raspberry Pi.
Wayland, iyo inoenderera ichishanda seyakajairwa kuratidza server, inoramba ichisanganisa neFedora 29, ichipa rutsigiro rwekutanga rwe Remote Desktop.
Iko kutsva kutsva ndiFedora Silverblue, yaimbonzi Atomic Workstation. Iyo inoshandisa matekiniki emazuva ano senge Flatpak uye RPM OSTree yekusimudzira maatomu.
Iyo Xfce nharaunda inopa vashandisi zvakanyatsosarudzwa vhezheni 4.13 yekuvandudza mapakeji.
Iyo Fedora Anaconda inosimudzira ikozvino inogona kubata LUKS 2.
Mune ino beta nyowani tinogona kuona kuti iyo GRUB bootloader menyu ichavanzwa mumasystem ane imwechete yekuparadzira yakaiswa mune ramangwana, sezvo isingape ruzivo runobatsira ipapo.
Zvakare, iyo package package yakagadziridzwa kuti isanganisira Python 3.7, Perl 5.28. glibc 2.28, Gloang 1.11 uye MySQL 8.
Iyo yakagadzikana vhezheni ichave ichiwanikwa pakupera kwaGumiguru. Iyi beta kuburitswa inopa maficha senge modularity kune wese munhu, kuenderana neGNOME 3.30, uye zvimwe zvishoma shanduko.
3 Dhawunirodha Fedora 29 Beta
Modular repositori akaunzwa muFedora 28 yeFedora Server Edition. MuFedora 29 beta, modularity inowanikwa mune ese editions, twists, uye labs.
Modularity inogadzira akawanda mavhezheni makuru mapakeji anowanikwa akafanana. Ichashanda neDandified YUM Mhuri Pack (DNF).
Ne modularity, vashandisi vanogona kugadzirisa yavo yekushandisa system kune yazvino vhezheni ivo vachichengetedza iyo inodikanwa vhezheni yechikumbiro chekushanda kwakakodzera.
Naizvozvo, mushandisi haachafanirwe kutsanangura kazhinji nguva inodiwa yemapakeji avo kuburikidza neshanduro sisitimu yekushandisa, asi iwe unogona kuzviita mune yepakeji-nhanho kunyorera kwakapihwa ichi chinangwa.
Semuenzaniso, vanogadzira vanokwanisa kuwana akawanda maBhaibheri emaraibhurari uye masisitimu.
Fedora 29 Workstation Beta inotakura ine yazvino vhezheni yeGNOME. GNOME 3.30 inovandudza mashandiro uye inowedzera chishandiso chitsva chePodcasts. Iyo zvakare inongogadziridza Flatpaks muSoftware Center.
Kune zvakare zvimwe zvakawanda zvakagadziriswa zvinosanganisirwa muFedora 29.
Fedora Atomic Workstation ikozvino yakapihwa zita rekuti Fedora Silverblue.
Iyo GRUB menyu ichavanzwa panongoiswa chete imwechete sisitimu yekushandisa, nekuti haina kupa chero chinoshanda mashandiro muzviitiko izvi.
Iyo yazvino vhezheni yeFedora inounzawo zvigadziriso kune akawanda anozivikanwa mapakeji, anosanganisira MySQL, iyo GNU C Raibhurari, Python, uye Perl.
Dzimwe shanduko dzekushandura dzinosanganisira kubviswa seimwe nzira yekuvakisa, rutsigiro rwekutanga rweMunda Chirongwa Gedhi Array (FPGA), uye mapakeji izvozvi zvavakwa nerutsigiro rweSESE2.
Mazhinji mapurojekiti, kusanganisira Eclipse, abvisa rutsigiro rweiyo hombe endian ppc64 yekuvakisa. Saka ikozvino Fedora inofanirwa kumira kuburitsa chero mapc64 zvemukati.
Fedora Scientific ikozvino inotakura semabhokisi asina kukwana ayo akambounzwa seIO mafaera. Iwo maVagrant machati achapa vangangove vashandisi sarudzo yehukama kuyedza Fedora Sayenzi uku uchichengeta iyo yazvino inoshanda sisitimu.
Dhawunirodha Fedora 29 Beta
Shanduro yacho Fedora 29 beta yave kuwanikwa kurodha pasi uye kuyedzwa neavo vanoda kubatsira mukuburitswa kutsva uku mukuona kwekukanganisa. Saka zvakakosha kusimbisa kuti iyi vhezheni haina kukurudzirwa kuti ishandiswe zuva nezuva.
Iyo beta vhezheni yeFedora 29 Workstation Beta inowanikwawo kurodha pasi pamwe neshanduro dzakasiyana dzeiyi (spins).
Mhando dzakasiyana dzeARM dzinogona zvakare kurodha pasi kuti dziongororwe. Kuburitswa kwakadzikama kweFedora 29 kwakarongerwa Gumiguru 23.
Iyi ndiyo nhanho huru inotevera kune yakatsiga vhezheni yeLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora 29 Beta: iyo yekutanga kugovera inosanganisira Gnome 3.30 "Almería"
Iyo GNOME 3.30 Runtime ikozvino yave kuwanikwa muFlatpak